ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးပျားရည်ဆမ်းခရီးဦးတည်ရာနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးပျားရည်ဆမ်းခရီးဦးတည်ရာနေရာများ
ဥရောပ၌ Honeymoon Destinations များကိုရွေးချယ်ခြင်းထက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပိုကောင်းသောနေရာမရှိပါ.
၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ မီးရထားခရီးသွားလာ, သငျသညျတန်ချိန်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် လှပသောနေရာများ သင့်ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးအပေါ်. နေရောင်များများနှင့်အတူ, လှပသော bays, စပျစ်ဥယျာဉ်, နှင့်အဆုံးမဲ့အချစ်ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင် options များ, အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကအကောင်းဆုံးပျားရည်ဆမ်းခရီးနေရာများဥရောပ၌ရှိကြ၏! ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့များမှာ ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များ အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးခရီးစဉ်၏အရှိဆုံးအောင်များအတွက်.
ဥရောပ၌ပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ်များ – Positano, အီတလီ
Positano အီတလီတောင်ပိုင်းရဲ့ Amalfi ကမ်းခြေပေါ်မှာ cliffside ရွာဖြစ်ပါသည်. Neptune အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဒဏ္ဍာရီအဆိုအရ, သမုဒ္ဒရာ၏ဘုရားသခင်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တစ် nmph သည်. ၎င်း၏ကြော beachfront နှင့်မတ်စောက်သော, နှင့်အတူစီတန်းကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများ စျေးဆိုင် နှင့်ကဖေးကကျော်ကြားဘာလဲ. သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဟာဗာဂျင်းမာရိ၏တစ်ဦး 13 ရာစုဘိုင်ဇင်တိုင်းအိုင်ကွန် featuring Chiesa di စန်တာမာရီယာ Assunta သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်.
အဘယျကွောငျ့အခြို့ကိုချွတ်အလုပ်မဖြစ် မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့် နှင့်ဘုရား၏ Path ကို ဦး တောင်တက်လမ်းကြောင်း, သောအခြားမှော်ကမ်းရိုးတန်းမြို့များမှ Positano ဆက်သွယ်. ရှေးဟောင်းလမ်းများမှတဆင့်တစ်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်အတူသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုချွတ်ပြီးစီးခြင်း, အဆိုပါစစ်မှန်စားသောက်ဆိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ, နှင့်သမိုင်းဝင်အိမ်များဟာတောငျကုနျးပျေါမှာအလတ်စားနှင့်နမူနာကောကျ စစ်မှန်အစားအစာ. သင်အစဉ်အဆက်သင်၏အပျားရည်ဆမ်းခရီးချန်ထားမည်ကိုဘယ်လိုတွေးမိစေခြင်းငှါ,!
ဤလှပပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဤရွာသည်ရက်ပေါင်းများစွာဥရောပ၌သင်၏ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။. အဆိုပါအဝါနုရောင်ရှိသော၏ရှေ့တော်၌, ပန်းရောင်, ကျောက်သလင်းအပြာမြေထဲပင်လယ်ရေကမ်းရိုးတန်း၏ဘေးထွက်ချပျဆငျ့အဝါရောင်နှင့် terra-cotta အိမ်များကမ္ဘာတစ်လွှားကျော်ကြားသည်နှင့်ရာစုနှစ်အီတလီကမ်းခြေ၏ဤဖြစ်မည်အပိုင်းဧည့်သည်များ mesmerizing ထားပြီး.
ကဲ့သို့ အိပ်မက်ထဲသို့နင်း, Positano မေတ္တာ၌ဖြစ်ခြင်းဆင်နွှဲရန်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! လုပ်ဖို့သိပ်ရှိတယ်; သင်တစ်ဦးရှိသည်ဖို့သေချာနေ တစ်သက်တာ၏ခရီးစဉ်.
ဥရောပ၌ပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ်များ – Hvar, ခရိုအေးရှား
ဥရောပ၌သင်၏အကောင်းဆုံးပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ်ကိုရှာဖွေသည့်အခါ, Hvar, ခရိုအေးရှားစုံတွဲများစာရင်းအပေါ်မကြာခဏဖြစ်ပါသည်! သဘာဝအလှအပမေးရိုး-ကျဆင်းနေ, ရှေးခေတ်ရိုးတံမြို့များ, နှင့် Adriatic ၏အဆုံးမဲ့အပြာ: ခရိုအေးရှားသည်ပျားရည်ဆမ်းခရီးသို့မဟုတ်အချစ်ဇာတ်လမ်းအသေးစားအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. နေရောင်များများနှင့်အတူ, စပျစ်ဥယျာဉ်, နှင့်စားသောက်ဆိုင် options များ, သင်သည်ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဦး တည်ရာနေရာတွင်ဥရောပ၌ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်သောအခါသင်ကိုချစ်လိမ့်မည်.
ခရိုအေးရှားရဲ့ Dalmatian အဘိဓါန်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်အခြေချနေထိုင်, Hvar နိုင်ငံ၏လူကြိုက်အများဆုံးနွေရာသီကျွန်းဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. မင်္ဂလာဆောင်စျေးကြီးနိုင်ပါတယ်ကြှနျုပျတို့သိ, ဒါကြောင့်သင်ကဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများကြောင်းသိရန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မယ် ပိုပြီးတတ်နိုင် ဥရောပ၌ပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ်များ၏စာရင်းတွင်!
Gothic ဗိသုကာနှင့်ပြည့်ဝသောဤမြို့ငယ်လေးသည်အကောင်းဆုံးသောနေရာဖြစ်သည် စိတ်အေးလက်အေး Vibe ရှာဖွေနေစုံတွဲများ တစ်နေ့တာအတွက်သမိုင်းနှင့် sightseeing အနည်းငယ်နှင့်အတူ. ရွက်အတွက်ခရိုအေးရှားတွေ့မြင်ယေဘုယျ-နှင့်ဖွင့်ကရင်ဆိုင်ရပါစေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နေစဉ်, ထို့အပြင်တစ် ဦး အပေါ်ရောက်ရှိရန်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်း ပျားရည်ဆန်းလယခုလဟူ.လည်း, Uber တရားဝင်ဒေသတွင်း၌ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆက်မပေးသင်ထင်လိမ့်မယ်လမျး၌.
တစ်ဦးကရထား Save Hvar တိုက်ရိုက်သွားလာပါဘူး, ခရိုအေးရှား. ကြှနျုပျတို့သညျပွု, သို့သော်, ကွန်နက်ရှင်သွားရောက် ဘူတာ သောသင်သွားချင်ဘယ်မှာမှသငျသညျရနိုင်!
လူကြိုက်များသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး app သည် ခရိုအေးရှားအတွက် UberBoat လွှတ်, အဆိုပါတောက်ပ Adriatic ပင်လယ်ပြင်ပေါ်တွင်ပင်လယ်မှာတစ်ရက်ပျော်မွေ့ဖို့ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်. ယခင်ကမိုင်ယာမီနှင့်ဖြန့်ချိ အစ္စတန်ဘူလ်, UberBoat င်း၏လိင်အရအခွင့်အရေး SUV ကားပုဂ္ဂလိကရွက်လှေအတူရတယ်လျှင်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ On-ခေါ်ဆိုခစင်းလုံးငှားဖြစ်လိမ့်မည် စာအုပ်ဆိုင်မှနည်းတူလွယ်ကူပါတယ် သင့်ရဲ့ Uber အပေါ် app ကို ကားတစ်စီးအဖြစ်နှင့်အခြားလူကြိုက်များအတွက်ခရိုအေးရှားတစ်လျှောက်လုံးမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် ခရီးသွားဧည့်ဟော့စပေါ့ Split ကိုနဲ့တူ, Dubrovnik, နှင့် Korcula ကျွန်း.
ဥရောပ၌ပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ်များ – ဇူးရစ်, ဆွစ်ဇာလန်
ဆွစ်ဇာလန် သင်သည်ဥရောပ၌ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ခွာခြင်းကိုစဉ်းစားသောအခါပထမ ဦး ဆုံးသောသူဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေဖြစ်ပါသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်. အများဆုံးဥရောပနိုင်ငံများသို့အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဆွေမျိုးသော်လည်း, ဆွစ်ဇာလန်လက်ရာမြောက်သောသဘာဝကရှုခင်းပိုင်ဆိုင်. picturesque ကျေးရွာပေါင်း, ခေတ်မီမြို့ကြီးများ, ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်, မင်းရဲ့နွေရာသီမှာလည်ပတ်မှုရှိမရှိမင်းရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့နောက်ခံ, နွေဦး, နွေရာသီ, သို့မဟုတ် ကျ.
ဇူးရစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအတက်ကြွစီးတီးဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းမြို့ကြီးများပေါ်. အဆိုပါရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်လမ်းကြောင်း, သာယာလှပကမ်းနား လမျးလြှောကျသှားခွငျး, နှင့်နောက်ခံနှင်းအဖြစ်သို့ပေးတောင်များအံ့သြဖွယ်ဓါတ်ပုံတွေကိုအဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ! လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အနည်းငယ်အကြံပြုချက်များပါဝင်သည်; အဆိုပါန်းကျင်လက်၌လက် Walking အင်းအိုင် မြို့တော်ရဲ့အစွန်မှာဇူးရစ် shoreline. တစ်မူထူးခြားသောထောင့်ကနေမြို့ကြည့်ဖို့တစ် paddleboat ငှားရမ်း. onboard ပြီးတာနဲ့, သင် quaint-ရှာဖွေနေပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများရင်ခုန်စရာ Vista အတွက်ယူနိုင်ပါသည်, အဆိုပါနေထိုင်သူ SWAN ဖြင့်လိုက်ပါသွား.
စိန်ဘို့စျေးဝယ်အစီအစဉ်အပေါ် အကယ်., ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေ! သငျသညျဇူးရစ်ရဲ့ Bahnhofstrasse အပေါ်အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်, မကြာခဏဆွစ်ဇာလန်၏ပဉ္စမရိပ်သာလမ်းဟုအမည်ပေးထားသည့်သော. ဇူးရစ် luxe ရင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် Jewel အတွက်, အဖြစ်ဦးစီးဌာနစတိုးဆိုင်များ, ဝင်းဒိုးကို display တွေပြောင်လက်လျက်နှင့်အတူစျေးဝယ်စုံစမျး.
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ် – ရောမမြို့, အီတလီ
အီတလီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံစုံတွဲတစ်နှစ်သက်တော်မူ၏. ကအများဆုံးဥရောပမှာတော့ပျားရည်ဆမ်းခရီးဦးတည်ရာနေရာများစာရင်းကိုအပေါ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးတစ်ခုဖြစ်သည်, လက်ထပ်အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်ခံစားရန်ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်. ၎င်း၏ထံမှ cobbled လမ်းများ နှင့်အထင်ကရအဆောက်အမှ ပြတိုက်, ရုပ်ရှင်ရုံ, နှင့်ရင်ခုန်စရာ စားသောက်ဆိုင်, သငျသညျအတူတူပျော်မွေ့ဖို့အဆုံးမဲ့အတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်.
သငျသညျရောမပွဲကြည့်စင်သို့သွားရောက်ရမည်ဖြစ်သည်! သူတို့ကအသေးစိတ်၎င်းတို့၏ grandeur နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အကမ္ဘာတစ်လွှားလူသိများကြသည်. အချည်းနှီးသောရုပ်ရှင်ရုံကိုကြည့်ရှုရန်မျက်မှောက်များမှာ. အကောင်းဆုံးအော်ပရာအနုပညာရှင်များ၏ဖျော်ဖြေမှုနှင့်အတူပဲ့တင်သံစတင်သောအခါ, အတွေ့အကြုံဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းသည်.
အခြားအအီတလီမြို့မြို့တို့မှကျော်လာမယ့်စုံတွဲများအတွက်, ရထားရောမမြို့သို့ရောက်ရှိ တစ်ခုစံပြ option ကိုဖွစျစနေို. ရိုးမား Termini, ရောမမြို့ရထားလမ်းအမျိုးမျိုးသောအီတလီချိတ်ဆက်နှင့် ဥရောပမြို့ကြီးများ. ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကြိုတင်ယူထား. တစ်ကြေးမပါဘဲမိနစ်၌သင်တို့၏ရထားခရီးစဉ်များစာအုပ်ဆိုင်မှကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကိုသုံးပါ.
သင်၏ပျားရည်ဆမ်းခရီးကိုဥရောပ၌သင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်. သငျသညျအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောသင့်ရဲ့ရထားခရီးသွားဘွတ်ကင်သေချာအောင်လုပ်ပါ တစ်ဦးကရထား Save အစာရှောင်ခြင်းသေချာစေရန်, တတ်နိုင်ဝန်ဆောင်မှု!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhoneymoon-destinations-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ပျားရည်ဆန်းလ #စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း europetravel အချစ်ဇာတ်လမ်း